७२ सालको महाभुकम्पमा धरहराबाट ख’सेर बाँचेकी रमिला, गहभरि आँशु पार्दै यस्तो भन्छिन् । – Yuwa Aawaj
७२ सालको महाभुकम्पमा धरहराबाट ख’सेर बाँचेकी रमिला, गहभरि आँशु पार्दै यस्तो भन्छिन् ।
चैत्र ३, २०७७ मंगलबार 1034
काठमाडौ : कुरा गर्दागर्दै रमिला श्रेष्ठ एकछिन टोलाउँथिन् र हामीलाई भनिरहन्थिन्– मलाई पहिलाको कुरा धेरै नगर्नु न डर लाग्छ । उनको अनुहारमा तनावका ध’र्सा देखिएपछि हामीले पनि भूकम्पका विषयमा उनलाई धेरै सोध्न उचित ठानेनौँ ।
तर, कुरा गर्दै जाँदा उनी आफैँ प्रसंग निकाल्थिन् र सन्दर्भ लम्बिँदै जान्थ्यो । तीन दिनअघि उनले फेरि भू’कम्प गएको सपना देखिन् । यो तीन वर्षमा उनले भूकम्प गएको सपना सयौँपटक देखिसकिन् । बिहानपख उनलाई बेस्सरी खाट हल्लिएजस्तो हुन्छ र उनी असिनपसिन हुँदै उठ्छिन् ।
म भूकम्प गएको सपना देखिरहन्छु तीन दिनअघि पनि देखेकी थिएँ । सपनामा खाट हल्लिएजस्तो लाग्छ, आफूले बारम्बार देख्ने सपना सम्झिँदै उनले सुनाइन्, त्यस्तो सपना देख्दा अबचाहिँ बाँच्दिनँ किजस्तो पनि लाग्छ ।भूक’म्पको सपना उनी प्रायः बिहानपख देख्छिन् । सपनाबाट ब्युँझिएपछि उनलाई असाध्यै डर लाग्छ र फेरि निदाउनै सक्दिनन् ।
बारम्बार देखिने त्यही सपनाले उनलाई लखेटिरहन्छ । यस्तो सपना कहिल्यै नदेखिए पनि हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, तर देखिरहन्छु, उनी भन्छिन् ।०७२ वैशाख १२ गते उनी साथीसँग धरहरा चढ्न पुगिन् । धरहराको टुप्पोबाट फेदमा मान्छेहरू किरिङमिरिङ देखिन्थे ।
गाडीको गोलाकार धर्सो टुँडिखेललाई केन्द्र पारेर चलायमान थियो । रामेछापबाट काठमाडौं घुम्न आएकी उनलाई ध’रहरामाथिबाट काठमाडौं हेर्दा मज्जा लाग्यो । तर धरहराको माथिल्लो उचाइबाट काठमाडौं हेर्दा लागेको खुसी धेरै बेर टिक्न सकेन ।
एक्कासि हावा चलेजस्तो लाग्यो उनी थुचुक्कै भुइँमा बसिन् । त्यसपछि के भयो उनलाई थाहा छैन । होसमा आउँदा बेस्सरी घामले पोलेजस्तो भयो । भित्र कहाँ–कहाँ पीडा भएजस्तो, मुख सुकेजस्तो लागेको थियो । फेरि धुम्म भयो । छिनछिनमा होस आउँदै–जाँदै गरेको थियो । होसमा आएका वेला खुट्टा पसारेर बसेको अवस्थाको सम्झना छ,उनलाई । खुट्टा चलाउन खोजिन्, तर सकिनन् ।
खुट्टा चल्दै चलेन । आफ्नो खुट्टा भाँ’चिएको थाहा पाउन उनलाई धेरै बेर लागेन ।ला यस्तो भयो, अब ममी–ड्याडीले मा’र्नुहुन्छजस्तो लाग्यो, एकदमै ड’र लागेको थियो, ’त्यो घट’ना सम्झिँदै उनले भनिन् ।एकैछिनमा उनलाई कसैले वीर अस्पताल पुर्‍यायो ।कसले लग्यो उनलाई अझैसम्म थाहा छैन ।
साँझपख एकजना दिदीले दिउँसोको घट’ना सम्झाएपछि बल्ल भू’कम्प गएको र आफू धरहराबाट खसेर पनि बाँ’च्न सफल भएको उनलाई थाहा भयो । त्यसपछि यति धेरै खुसी भएँ कि भन्नै सक्दिनँ, धरहराबाट खसेर पनि बाँ’चेको कुराले मलाई दोस्रो जुनी पाएजस्तै लाग्यो,उनले सुनाइन् ।
भूक’म्पपछिको एक वर्ष भने सुखद रहेन, उनको । भाँ’चिएको खुट्टा नि’को भएन । दुवैतर्फ काखीमा वैशाखी च्यापेर जसोतसो घरवरपर डुल्न त सक्थिन्, तर धेरै टाढा हिँड्न सकिनन् । खुट्टामा राखेको स्टिल ह’ल्लिन थालेपछि उनलाई अब कहिल्यै खुट्टा निको हुँदैन जस्तै लाग्यो ।
भाग्य’ले दोस्रो जुनी पाएको ठानेकी उनलाई जीवनमा केही गर्नैपर्छ भन्ने लाग्छ । ‘यत्रा मान्छे मर्दा पनि म बाँचेकी छु, जीवनमा केही गर्नैपर्छजस्तो लागेको छ,उनी भन्छिन् ।घा’इते भएर उनी एक वर्ष ओछ्यान परिन् । पढाइ छुट्यो, साथीहरू छुटे । भू’कम्प जाँदा १७ वर्षकी उनी रामेछापकै सेतीदेवी उच्च माविमा ९ कक्षामा पढ्दै थिइन् ।
काठमाडौं घुम्न आएको समयमा दु’र्घटनामा परिन् । त्यसपछि बुबासँगै काठमाडौंमा बस्न थालिन् । बाफलको अमरज्योति उच्च माविमा भर्ना भइन् ।यसपालि एसइई परीक्षा दिएकी उनी एसइई पास भएपछि बिजनेस म्यानेजमेन्ट पढ्ने सोचमा छिन् । लक्ष्यचाहिँ सरकारी जागिर खाने छ, उनको । मलाई जे पनि गर्न सक्छुजस्तो लाग्न थालेको छ,सरकारी जागिर खाने इच्छा छ रमिलाले आफ्नो लक्ष्य सुनाइन् ।पुन प्रकाशित
Prevबधाई ! नेपाली चेली सृजना राना मगर भइन अमेरिकन आर्मिको उच्च पदमा छनोट हुन सफल !
Nextबाइडेनलाई किमकी बहिनीको चेतावनी : राम्रोसँग सुत्ने भए हाम्रो देशमा बा’रुदी ग’न्ध नफैलाउ ।